Afrikaanka ayaa ka xanaaqay soo jeedinta talaalka COVID-19: “Ma nihin Guinea Pigs” - Amjambo Africa
Afrikaanka ayaa ka xanaaqay soo jeedinta talaalka COVID-19: “Ma nihin Guinea Pigs”
By Damascene Hakuzimana
Wareysi lala yeeshay labo dhakhtar oo Faransiis ah oo ka howlgala telefishanka Faransiiska ee LCI ayaa dhabar jab ku noqday warbaahinta ka dib markii dhakhaatiirtu ay soo jeediyeen in tijaabooyinka talaalka COVID-19 ee laga bilaabayo Yurub iyo Australia in marka hore lagu tijaabiyo Afrika. Tijaabadu waxay ka kooban tahay in la arko haddii tallaalka cudurka Bacille Calmette-Guérin (BCG) uu ku guuleysan doono daaweynta COVID-19. In kasta oo tallaalka aan si ballaaran looga aqoon Mareykanka, haddana badanaa – natiijooyin isku dhafan – ayaa lagu siiyaa carruurta iyo dhallaanka ku nool waddamada ay qaaxadu ku badan tahay.
Ciyaartoyda isboortiga, marti sharaf siyaasadeed, iyo muwaadiniinta caadiga ah ee ka soo jeeda Afrika iyo daafaha adduunka ayaa muujiyay sida ay uga careysan yihiin soo jeedinta dhakhaatiirta. Waxay dhakhaatiirta ku tilmaameen kuwa samaynaya ‘midab-takoor’. Labada dhakhaatiir ee arrintan ku dhawaaqay waa Paul Mira, madaxa qaybta daryeelka degdegga ah ee Cusbitaalka Cochin ee Paris, iyo Camille Locht, oo ah madaxa cilmi-baarista Machadka Caafimaadka Qaranka ee Faransiiska.
Mira waxay soo jeedisay, “Waxay noqon kartaa arrin adag. Miyayna ahayn inaan ku sameyn karno daraasaddan Afrika, halkaasoo aan lahayn wax wajiga lagu xirto, daaweyn, ama daryeel deg-deg ah –taas oo kala ah waxaa lagu sameeyay daraasada gaar ka ah oo AIDS-ka, halkaas oo lagu tijaabiyay daawada dumarka ka shaqaysta jidhkooda, waxaan iskugu daynaa waxyaabahaas, maxaa yeelay waxaan ognahay inay dadkani ufufudahay inay cudurka qaadaan oo aany naftooda ilaalin?”
Locht ayaa ku yidhi, “Waad saxan tahay”.
Shabakadda wararka ee Africa News ayaa soo warisay caro ka careysiisay Xiddigaha Kubadda Cagta Afrika. Weeraryahankii hore ee Chelsea Didier Drogba ayaa dhaleeceeyay soo jeedinta ah in Afrika loo isticmaalo goob daawooyinka lagu tijaabiyo oo lagu xalliyo dhibaatada Coronavirus ee socota.
“Gebi ahaanba waa wax aan macquul aheyn, aan sii wadno digniinta ah in… Afrika aanay ahayn sheybaar wax lagu tijaabiyo. Waxaan jecelahay inaan si cad u dhalleeceeyo ereyadaa cayda ah, beenta ah, oo waliba ah cunsuriyada. Naga caawiya inaan Badbaadino Afrika… ”Drogba ayaa ku qoray Twitter.
Demba Ba oo ka tirsan naadiga reer Turki ee Istanbul Basaksehir ayaa sidoo kale ujawaabay si xanaaq ah oo ku qoray Twitter. “Ku soo dhowow reer Galbeedka. Meesha ay dadka caddaanka ahi aaminsan yihiin inay aad uga sarreeyaan dadka kale, cunsuriyadda iyo nacasnimadu waa wax caadi ah. ”
#AfricansAreNotLabRats #AfricansAreNotGu GuineaPigs ayaa lagusoo qoray Twitterka tan iyo markii uu dhacay wareysiga Dhakhaatiirta. Agaasimaha guud ee Ururka Caafimaadka Adduunka (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus ayaa dhaleeceeyay hadalada dhakhaatiirta, isagoo ku tilmaamay inay yihiin ‘cunsuri’ iyo xusuusin nasiib darro ah oo kujirta ‘maskaxda gumeystaha.’
Pious Ali oo reer Maine ah, ayaa ka faallooday arrimahaas oo yidhi, “Tan iyo markii Faransiisku cagta saaray qaaradda Afrika sanadkii 1659 gumaystayaashu waxay si joogto ah u gudbiyeen wax kasta oo ay awoodaan … Waxaan ugu baaqayaa Midowga Afrika inay dhahaan maya mar uun cunsuriyaddaas foosha xun. Awowayaasheenii hore waxaa laga yaabaa inaysan helin qalab ay kula dagaallamaan gumaystayaasha, laakiin hoggaamiyayaasha hadda ma leh wax cudurdaar ah… Waa laga tegay maalmihii ay gumaystayaashu u isticmaali jireen waddammada faqiirka ah inay ka dhigtaan sheybaarradooda.
Wakaaladda wararka ee Associated Press ayaa qortay in Dhakhtarka Jean-Jacques Muyembe, oo madaxa ka ah machadka cilmiga noolaha ee Congo-Kinshasa, isla markaana loo aqoonsaday inuu joojiyay cudurka Ebola ee ka dillaacay Congo, ayaa qaatay aragti ka duwan hadalada, isagoo soo dhoweynaya tijaabooyinkaas in lagu sameeyo Afrika. “Tallaalka waxaa lagu soo saari doonaa Mareykanka, ama Kanada, ama Shiinaha. Waxaan musharrax u nahay inaan ku sameyno imtixaanka halkan, ”ayuu yidhi Muyembe. Hadaladiisa ayaa dhalisay muran ka dhashay DR Congo iyada oo lagu eedeeyay in dadka loo adeegsaday sidii xoolaha dawada lagu tijaabiyo.
Sida laga soo xigtay Deutsche Welle ee Jarmalka, qareenno Moroccan ah oo wadajia ayaa sheegay inay dacweyn doonaan Dr. Mira iyo aflagaadada cunsuriyadda. Hay’adda samafalka cunsuriyadda ee Faransiiska, SOS Racisme, ayaa soo saartay qoraal ay ku leedahay “Maya, Afrikaanku ma’aha xayawaan daawada lagu tijaabiyo” waxayna ku tilmaameen isbarbardhigga AIDS-ka iyo naagaha ka ganacsada jidhkooda inuu yahay ‘dhibaato’ iyo wax’aan la aqbali karin’ CSA, hay’adda ilaalinta anshaxa ee Telefishanka Faransiiska, ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee AFP inay heshay cabasho.
Jimcihii, Abriil 3, Mira waxaa laga soo xigtay isagoo leh: “Waxaan rabaa inaan u soo bandhigo raali gelinteyda dhammaan kuwa waxyeelladu gaartay, naxdinna ku abuurtay, oo dareemay in ay cay tahay hadaladii aan si dhaqso leh u dhahay.”
PreviousThe Stay at Home order explained in this Somali video
NextNeed help picking up supplies? Mana Maine can help.
Raadraaca Xiriirka ee Cudurka COVID-19
Heerka infakshanka ee dadka midabka leh ee Maine kor ayuu u kacayaa
Rabshado iyo isu soo bax ayaa ka hordhacay doorashada madaxweynaha iyo sharci dejiyeyaasha ee Burundi, in kasta oo lagu guda jiro COVID-19
Video – featuring Hassan Alasow of Catholic Charities Maine